Ansu Fati oo ceebeystay dhammaan Weeraryahannada kooxda Real Madrid marka laga reebo Karim Benzema – Gool FM
(Barcelona) 20 Luulyo 2020. Da’ayarka naadiga Barcelona ee Ansu Fati ayaa muujiyay tayadiisa xilli ciyaareedkiisii ugu horeeyay uu ka soo muuqday kooxda koowaad ee Barca, wuxuuna ku guuleystay inuu magaciisa qeyb kaga dhigo xiddigaha ugu caansan ee ku xamaasha kubadda cagta Yurub, sidoo kale waa xiddiga ugu caansan dhab ahaantii ee dhanka da’ayarta ah.
Ansu Fati ayaa ka soo muuqday kulankii ugu dambeeyay xilli ciyaareedkan ay Barcelona shalay kula ciyaartay kooxda Deportivo Alavés, wuxuuna awooday inuu dhaliyo goolka daah furka ee kooxdiisa daqiiqadii 23-aad.
Kooxda Barcelona ayaa awooday inay guul weyn kaga soo xirato horyaalka La Liga ee dalka Spain kaddib markii ay kaga adkaatay kooxda Deportivo Alaves oo ay ku booqatay Estadio Mendizorroza 0-5.
Xiddiga da’ada yar ee reer Spain ayaa ku guulaystay inuu 8 gool ku dhaliyo maaliyada kooxda Barcelona xilli ciyaareedkan inkastoo ay yaraayeen kulamadii uu ciyaaray.
Ansu Fati ayaa ciyaaray 32 kulan oo inta ugu badan uu badel ku yimid, wuxuuna cel-celis ahaan ciyaaray 1355 daqiiqo oo kaliya, dhinaca kale wuxuu gool dhaliyay 168 daqiiqo kasta.
Sidaas darteed, Ansu Fati waa weeraryahankii afaraad ee safka Barcelona ah kaddib Lionel Messi, Luis Suarez iyo Antoine Griezmann, inkasta oo, rikoorkiisa gooldhalineed ay muujinayaan inuu ka sareeyo dhammaan da’ayarta iyo weeraryahanada kooxda Real Madrid marka laga reebo Karim Benzema.
Rodrygo waa weeraryahanka dhaliyay goolasha ugu badan safka kooxda Real Madrid marka laga reebo Karim Benzema, wuxuu 7 gool ka dhaliyay tartamada La Liga iyo Champions League, waana wax ka yar hal gool inta uu dhaliyay Ansu Fati, iyadoo laga war qabo in daqiiqadaha ay ciyaareen ay isku mid yihiin.
Vinicius Jr ayaa dhaliyay 5 gool oo kaliya, Gareth Bale ayaa sidoo kale dhaliyay 3 gool xilli ciyaareedkan oo dhan, si la mid ah xiddigaha Lucas Vázquez iyo Marco Asensio, sdioo kale Luka Jović ayaa dhaliyay 2 gool oo kaliya, halka xiddigaha Eden Hazard iyo Mariano Díaz loo diiwaan galiyay 1 gool oo qura.
Kabtan Jack Grealish oo ugu dambeyn ka hadlay Wararka la xiriirinaya Kooxda Manchester United